Jery todika 2017 : tsy hita ny tohin’ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine » · Aponga
Jery todika 2017 : tsy hita ny tohin’ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine »
Anisan’ny raharaha iray tsy nahitana tohiny ny momba ny naha voarohirohy ilay mpandraharaha, Razaimamonjy Claudine amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. Ahina hivalona hiaraka amin’ny taona 2017.
Nosamborin’ny Bianco teny Mahamasina, ny 3 avrily, noho ny kolikoly tamin’ny famatsiam-bola manokana ho an’ny kaominina ny mpanolotsain’ny filohan’ny Repoblika: 550 tapitrisa Ar any ho any no voahodinkodina. Raharaha efatra no nisamborana azy, ary mbola misy raharaha efatra hafa. Namoahan’ny fitsarana misahana ny raharaha kolikoly didy fitanana am-ponja vonjimaika izy, ny 7 avrily.
Niantso mpanao gazety andro alina ny minisitry ny Fitsarana, nilaza fa tsy voahaja ny 48 ora ahazoana mitana azy. Nalefa tatsy amin’ny Clinique Fortis Darné, Nosy Maorisy, hoe hitsabo tena Razaimamonjy Claudine, ny 10 avrily. Tafaverina teto Madagasikara, ny 22 avrily, fa tsy ankasitrahan’ny fitondrana any an-toerana ny fitsaboana azy. Tsy nazava be ihany izay tena nandefasana azy any ivelany sy ny fodiana.
Nilaza, ohatra, ny tonia voalohany mpampanoa, ny 10 avrily, fa tsy ara-dalàna ny nandefasana azy any ivelany noho ny fahasalamany. Tany amin’ny 13 avrily, fa tsy ny marain’ny 11 avrily, ohatra, vao nanazava ny Polisy misahana ny sisintany (Paf) fa ara-dalàna ny taratasy momba azy tamin’izany, rehefa nahabe resaka ny raharaha. Nambara fa manohy ny fitsaboan-tena eny amin’ny HJRA, Ampefiloha, izy.
Tsy hita mazava ny tohin’ny raharaha
Nanakana ny fanamarinan’ny mpitsara mpampanoa ny fitsaboan-tenany ao amin’ny HJRA, Ampefiloha,ny loholona iray, ny 24 avrily. Nandeha aza ny resaka fa tsy mitsabo tena amin’izany izy, matoa tsy azo tampohina ny fanamarinana na ao tokoa izy na tsia. Nambara fa niala io hopitaly io izy, ny 15 jona, ary nafindra eny amin’ny fonja natokana ho an’ny vehivavy any Manjakandriana. Anton’izany ny hoe fitandroana ny fiarovana azy. Fantatra fa izay efa vita tanteraka ny fitsarana azy no tanana amin’io fonja io.
Tsy nandeha araka izay izy koa ny fitondrana mpanao gazety tany Manjakandriana, ny 22 jona. Na ny tomponandraikitra teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana aza, nilaza ho tsy mahalala ny amin’izany. Misy tetika maizimaizina Na izany aza, tsy nahazo fahafahana vonjimaika izy, ny 7 aogositra. Andrasana hatrany izay tohiny, satria mbola misy raharaha efatra hafa miandry azy.
Indemnités des responsables communaux : Aucun chiffre n’a été avancé
Hery Rajaonarimampianina – « Je ressens l’angoisse que vit chaque foyer »
Fanaraha-maso momba ny vatosoa : « tsy maintsy mila manova fomba fiasa », hoy ny minisitra